Zuva iro denga rinowira: rudo Phil mune chinyoreso chaMegan Maxwell | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Mabhuku, Romance novel
Musi unodonha denga (2016) inganonyorwa neSpanish María del Carmen Rodríguez del Álamo - yakasainwa pasi pezita rekunyepedzera Megan Maxwell-. Mutambo uyu unopa nyaya inofamba yeshamwari dzinoverengeka, idzo kubva paudiki dzakagadzira chisungo chisingadambuke chehama. Munyori akatarisa pakuratidza murangano mamwe maonero erudo rwechokwadi (iyo uzivi), kuburikidza nemitsara izere nemanzwiro uye zvakadzika manzwiro ayo anovandudza mweya.
Maxwell akavaka rakasimba basa mumabhuku madenderedzwa ane anopfuura makumi mana enganonyorwa. uye nomwe nyaya, basa raakagashira akawanda mibairo. Ane hunyanzvi mumhanzi wekudanana, kunyangwe akashinga en vamwe marudzi, s chick lit uye erootic. Zvekupedzisira zvinomira pachena Ndibvunze chero chaunoda (2012), yekutanga nhoroondo yeerotic yaakatsanangura uye iyo saga yakatanga Ndibvunze.
1 Pfupiso yeZuva iro Kudenga Kudonha
1.1 Kutanga kusangana
1.2 Hukuru hushamwari hunoberekwa
1.3 Shanduko hombe
1.4 Zvese zvinotanga pamusoro
2 Kuongorora kwezuva iro denga rinowa
2.2 Akawanda manzwiro
2.3.3 Vamwe vatambi
3 Nezve munyori
Pfupiso yeZuva iro Kudenga Kudonha
Alba musikana ane makore manomwe, uyo, pakudzokera kumba naamai vake -Teresa-, anorovera mumidziyo yakasiyana-siyana pamusuwo wechivako. Paunopedza kukwira masitepisi, tarisa mwana akasuwa kwazvo, maziso akazvimba nekuchema. Mukomana zita rake ndiNacho, ndeyemazuva ano nemusikana uye achangobva kutamira mukati nevanin'ina vake - Luis, 11, naLena, 4 - kuimba yekuvakidzana yaRemedios.
Achishamisika, musikana anotanga kutaura nenzira ine hushamwari naNacho, Quien le anoreurura kuti akarasikirwa nevabereki vake. Alba, akatamiswa nezvaakataura, anomuudza kuti anogona kuenda kunotamba kumba kwake chero nguva paanoda. Gare gare, Remedios anobvuma kushanya kuitira kuti muzukuru wake awane kumbofara. Ikoko, anotaurira Teresa nezve tsaona inosuwisa umo mwanasikana wake nemukuwasha, vabereki vevana vatatu, vakafa.
Munguva ino, rondedzero inopfuura nenguva dzakaomarara. Pakati pemitsara, Alba anoudza Nacho kuti vabereki vake vanogona kuva vake, uye vanovimbisana ushamwari hweupenyu hwese.
Zuva iro denga rakanga ...
Hukuru hushamwari hunoberekwa
Mushure mezvakaitika, ivo vacheche vatatu vakasiyiwa vachichengeta mbuya yavo inotapira Remedios, hukama hwepedyo hwunopa kuti Nacho naAlba vasaparadzane nekubatanidza hushamwari husinga putsike. Pakazosvika nguva yemakumi masere, vese vanomira kuve vana uye vanochinja pamwe kuti vakure. Vakakurira semhuri huru, uye vechidiki, kupfuura shamwari, vatove vakanga vakaita sehama.
Alba naNacho chengetedza hukama hwepedyo, tichigara tichivimba nezvakanaka nezvakaipa. Vese vari vaviri tsvaga kutora nhanho kumberi muhupenyu hwavo, y iripo nguvai chisungo chakadzika yeushamwari pakati pavo inokanganiswa. Alba anowira murudo kupenga kwemurume, kusvika pakushaikwa bofu muzvinhu zvakasiyana. Nyaya iri kudzora, uye inoda kumuendesa kure nemhuri yese, uye kunyanya kubva kushamwari yake yaanoda.
Kunyange zvakadaro Nacho anomuyambira Kwayedza kubva mukukuvara kuti munhu uyu anokukonzera, asi Ella haiteereriuye pakupedzisira anoroora. Murume wake anomutora kuenda kuMadrid, achimuparadzanisa nemunhu wese; panguva iyoyo, Nacho anosarudza kutsvaga imwe nzira uye otamira kuLondon. Ikoko, rombo rake rinoratidzika kunge rinoshanduka paakasangana neumwe wake wemweya, asi mufaro haugari kwenguva refu, nekuti munhu iyeye anofa nechirwere chinoshamisa.
Zvese zvinotanga pamusoro
Mushure mekurambana kwake, Alba anosarudza kuenda kuLondon kunosangana zvakare neshamwari yake huru, pasina kana kufungira zvaari kusangana nazvo. Paunosvika, unomuwana asina kunyemwerera uye achipenya mumaziso ake izvozvo zvakazviratidza. Kuona mumwe nemumwe, vese vanonzwa kudzika pamoyo. Anokwanisa kumuburitsa mumufananidzo unoodza mwoyo uye vanovandudza hukama hwavo, asi munguva pfupi vanoona chokwadi chinotyisa chinovaisa pamuedzo.
Nacho anoonekwa aine chirwere chinozivikanwa zvishoma izvo zvakakonzera bongozozo panguva iyoyo. Unofanira kupotera, nekuti ivo vanovimbisa kuti inotapukira uye inouraya, mukuwedzera, haina mushonga unoshanda. Alba haasiye shamwari yake uye inokurudzira iwe mazuva ese kuti urambe uchienda. Pakati peizvozvo, rudo runogogodza zvakare pamikova yemoyo waAlba, ichi chichava icho chiedza chaanoda mukutarisana nerima rakawanda kudaro?
Kuongorora kwezuva iro denga rinowa
Musi unodonha denga inoverengeka yerudo yakamisikidzwa pakati peSpain neLondon, ine mapeji 416 akapatsanurwa kuita zvitsauko makumi matatu nezvitatu zvakareba. Iyo nyaya inotanga muna 1974, apo protagonists vayo vanosangana kekutanga, uyezve inopfuurira kuburikidza nemakore makumi masere kusvika mapfumbamwe. Iyo inorondedzerwa mumunhu wechitatu, nemutauro wakapusa, uyo unopa kuverenga kwakanaka uye kunonakidza..
Iyi rondedzero izere nemanzwiro akasimba, inochinja-chinja manzwiro. Mufaro nekusuwa zvinoratidzwa, asi zvakare yakawanda tariro mukutarisana nedambudziko. Saizvozvo, rudo runoratidzwa kupfuura vaviri vacho (iyo uzivi), iyo inobatanidza mhuri neshamwari. Mumitsara yake, munyori akataura mune izvi: "Ropa rinokuita hama, asi kuvimbika chete nerudo zvinokuita mhuri."
Iye mukadzi akanaka, anofara, akadzidza, mwanasikana akanaka, shamwari yakanaka uye nemoyo wakanaka. Nekuda kwekuziva kwake uye kudanana, anotorwa nemunhu akaipa, uye Anofanirwa kukura nekukasira mushure mekukundikana kwemuchato. Anobuda mune iyo mamiriro akasimbiswa, izvo zvichave zvakakosha kutsigira shamwari yake yepamwoyo, Nacho, waanoda zvisingaite.
Es murume akasvinuka uye akasununguka, anoda kunakidzwa noupenyu hwake zvizere. Mushure mezvipingamupinyi zvenguva dzose pakutsvaga wekufambidzana naye, akapotsa asiya zano, asi rwendo rwekuLondon runomuita mashiripiti aenderane nerudo. Kubva paudiki, Iye ishamwari yakatendeka yaAlba, anomuda zvikuru uye zviri naye kuti anozviratidza sezvaari. Kunyangwe achitambura chirwere cheropa pakupedzisira, haamborasi tariro uye anotsvaga kuipfuudza kune vese vaanoda.
Vatambi vari mubhuku rino vanhu vezuva nezuva, vanoziva uye vane hunhu manzwiro. Wese munhu, zvese zvepuraimari uye zvechipiri, inowedzera nyaya uye unounza hukama uye hunhu hwakakosha. Mukuwedzera kune protagonists, kutora chikamu kwaambuya, Blanca naRemedios; yevabereki. Teresa naJosé; uye hama, Luis naLena.
Mune ino rondedzero, Megan maxwell inorondedzera nehunyanzvi uye nehunyanzvi chirwere chakatora hupenyu hwakawanda muSpain. Naizvozvi, munyori anoratidza chokwadi chenguva uye nemagariro evanhu akatarisana nemamiriro aya, nekuti kwenguva yakareba yaionekwa setabho.
Maria del Carmen Rodriguez weAlamo akazvarwa neChishanu, Kukadzi 19, 1965 muNuremberg, Germany; baba vake iamerica uye vake mai veSpanish. Paaingova nemwedzi mitanhatu chete amai vake ndakafunga kudzoka naye kuenda kuSpain. Kubva ipapo, akagara mumaguta akati wandei munyika, akadai se: Barcelona, ​​Cádiz neMadrid, ndosaka aine nyika yeSpain.
Mushure mekurwara kwehutano nemwanakomana wake, akafunga kuenda pamudyandigere kubva kubasa kwake kuti amuchengete pamba. Ikoko, Akatanga kosi yepamhepo yekuverenga mabhuku uye akatanga kunyora zvinyorwa zvinoverengeka pasi pezita rekunyepedzera "Megan Maxwell." Mushure memakore anodarika gumi ezvinyorwa zvisina kunaka, muna 2009 nhoroondo yake yekutanga yakagamuchirwa: Ndakakuudza, uye muna 2010 akakunda iyo Seseña International Romance Novel Award.
Kubva ipapo, Munyori haana kumira, akaburitsa makumi mashanu makumi mashanu enoverengeka maanosanganisira matatu masaga: Varwi Maxwell, ndibvunzei y Fembera. Pawebhusaiti yake, anobvuma kuti: “Ndinoda kunyora mutambo werudo uye ndinoburitsa mhando dzakasiyana se chick lit, panguva ino, medieval, trime kufamba y erotica". Musanganiswa iwoyo wemastaira wakaratidza basa rekunyora rakabudirira reSpanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Romance novel » Musi unodonha denga